Ring of Fire: inona izany, toetra, hetsika ary maro hafa | Meteorolojia tambajotra
Portillo Alemanina | 06/01/2022 10:00 | Haibolantany
Eto amin'ity planeta ity dia misy faritra mampidi-doza kokoa noho ny hafa, ka ny anaran'ireo faritra ireo dia manaitra kokoa ary mety hihevitra ianao fa ireo anarana ireo dia manondro zavatra mampidi-doza kokoa. Amin'ity tranga ity dia hiresaka momba izany isika Vatosoa afo avy any Pasifika. Io anarana io dia manondro ny faritra manodidina an'io ranomasina io, izay ahitana horohoron-tany sy volkano matetika.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hilaza aminao ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny Ring of Fire, ny toerana misy azy sy ny toetrany.
1 Inona no atao hoe Ring of Fire
3 Ny asan'ny volkano amin'ny Ring of Fire
4 Ireo firenena andalovany
Inona no atao hoe Ring of Fire
Ao amin'io faritra miendrika kitron-tsoavaly fa tsy boribory io, dia betsaka ny horohorontany sy ny asan'ny volkano voarakitra an-tsoratra. Vao mainka mampidi-doza ny faritra noho ny loza mety hitranga. Ity peratra ity dia manomboka any Nouvelle-Zélande ka hatrany amin'ny morontsiraka andrefan'i Amerika Atsimo, miaraka amin'ny halavany mihoatra ny 40.000 kilometatra. Mamakivaky ny morontsiraka manontolo any Azia Atsinanana sy Alaska koa izy io, mamakivaky ny faritra avaratratsinanan’i Amerika Avaratra sy Afovoany.
Araka ny voalaza ao amin'ny plate tectonics, io fehikibo io dia manamarika ny sisiny misy ny Plate Pasifika miaraka amin'ireo takelaka tectonic kely kokoa izay mandrafitra ilay antsoina hoe crust. Amin'ny maha faritra misy horohoron-tany matetika sy misy volkano, dia sokajiana ho faritra mampidi-doza izy io.
Ny Ring of Fire dia miforona amin'ny fihetsehan'ny takelaka tectonic. Tsy raikitra ny takelaka fa mihetsiketsika foana. Izany dia noho ny fisian'ny convection ao amin'ny lamba. Ny fahasamihafan'ny hakitroky ny akora dia mahatonga azy ireo hivezivezy ary mampihetsika ny takelaka tectonic. Amin'izany fomba izany dia tratra ny fifindran'ny santimetatra vitsivitsy isan-taona. Tsy voamaritsika amin'ny ambaratongan'olombelona izany, fa raha mandinika ny fotoana ara-jeolojia isika dia miseho izany.
Nandritra ny an-tapitrisany taona, ny fihetsehan'ireo takelaka ireo dia niteraka ny fiforonan'ny Ring of Fire Pasifika. Ny takelaka tectonic dia tsy mitambatra tanteraka, fa misy elanelana eo anelanelan'izy ireo. Mazàna dia 80 kilometatra eo ho eo ny hateviny ary mihetsika amin'ny alalan'ny convection ao amin'ilay akanjo voalaza etsy ambony.
Rehefa mihetsika ireo takelaka ireo dia mirona hisaraka sy hifandona. Miankina amin'ny hakitroky ny tsirairay, dia mety hilentika eo ambonin'ny iray koa ny iray. Ohatra, ny hakitroky ny takelaka ranomasimbe dia lehibe kokoa noho ny an'ny takelaka kaontinanta. Noho izany antony izany, rehefa mifandona ny takelaka roa dia mitsoraka eo anoloan'ny takelaka hafa. Ity hetsika sy fifandonan'ny takelaka ity dia niteraka hetsika ara-jeolojika matanjaka teo amin'ny sisin'ny takelaka. Noho izany, ireo faritra ireo dia heverina ho mavitrika indrindra.
Ny fetra takelaka hitantsika:
fetran'ny convergence. Ao anatin'ireo fetra ireo dia misy toerana ifandonan'ny takelaka tektonika. Izany dia mety hahatonga ny takelaka mavesatra kokoa hifandona amin'ny takelaka maivana kokoa. Amin'izany fomba izany no miforona ilay antsoina hoe faritra subduction. Ny takelaka iray dia midina amin'ny iray hafa. Any amin'ireo faritra misy an'izany dia misy volkano be dia be, satria io subduction io dia mahatonga ny magma hiakatra amin'ny hoditry ny tany. Mazava ho azy fa tsy ho ao anatin’ny indray mipi-maso izany. Izany dia dingana iray izay maharitra an'arivony tapitrisa taona. Toy izany no namoronana ny andohalambo volkano.
Fepetra samihafa. Izy ireo dia mifanohitra tanteraka amin'ny convergent. Eo anelanelan'ireo takelaka ireo dia misaraka ireo takelaka. Isan-taona dia misaraka kely kokoa izy ireo, mamorona ranomasina vaovao.
Fetra fanovana. Ao anatin'ireo famerana ireo dia tsy misaraka na mifamatotra ny takelaka fa mihodinkodina mifanitsy na mitsivalana fotsiny.
Toerana mafana. Izy ireo dia faritra izay avo kokoa noho ny faritra hafa ny hafanan'ny lamba eo ambanin'ny takelaka. Ao anatin'ireo toe-javatra ireo, ny magma mafana dia afaka miakatra eny ambonin'ny tany ary mamokatra volkano mavitrika kokoa.
Ny sisintanin'ny takelaka dia heverina ho faritra ifantohan'ny jeolojia sy ny asan'ny volkano. Ara-dalàna àry raha be dia be ny volkano sy horohoron-tany mivondrona ao amin’ny Ring of Fire any Pasifika. Ny olana dia rehefa misy horohoron-tany any an-dranomasina ka miteraka tsunami sy tsunami mifanaraka amin'izany. Ao anatin'izany toe-javatra izany dia hitombo ny loza ka mety hitarika loza tahaka ny tany Fukushima tamin'ny 2011.
Ny asan'ny volkano amin'ny Ring of Fire
Voamarikao angamba fa tsy mitovy ny fizaran’ny volkano eto an-tany. Mifanohitra amin’izany. Izy ireo dia ampahany amin'ny faritra lehibe amin'ny hetsika ara-jeolojika. Raha tsy misy hetsika toy izany dia tsy hisy ny volkano. Ny horohoron-tany dia vokatry ny fanangonana sy famoahana angovo eo anelanelan'ny takelaka. Ireo horohoron-tany ireo dia fahita kokoa any amin'ireo firenena Pasifika Ring of Fire.
Ary izany ve Ring of Fire no iray izay mifantoka amin'ny 75% amin'ny volkano mavitrika amin'ny planeta manontolo. 90%-n'ny horohoron-tany koa no mitranga. Misy nosy sy vondronosy tsy tambo isaina miaraka, ary koa volkano samihafa, misy fipoahana mahery vaika. Matetika koa ny andohalambo misy volkano. Izy ireo dia rojo volkano hita eo an-tampon'ny takelaka subduction.
Izany zava-misy izany no mahatonga ny olona maro eran-tany ho gaga sy hihorohoro amin’ity faritra misy afo ity. Izany dia satria ny herin'ny fihetsik'izy ireo dia lehibe ary mety hiteraka loza voajanahary.
Ireo firenena andalovany
Ity rojo tektonika midadasika ity dia mamakivaky faritany efatra lehibe: Amerika Avaratra, Amerika Afovoany, Amerika Atsimo, Azia ary Oseania.
Amerika Avaratra: Mandeha amin'ny morontsiraka andrefan'i Meksika, Etazonia, ary Kanada izy io, mitohy hatrany Alaska, ary mikambana amin'i Azia any Pasifika Avaratra.
Amerika Afovoany: ahitana ny faritanin'i Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala ary Belize.
Amerika Atsimo: Ao amin'io faritany io dia saika manerana an'i Shily sy ny ampahany amin'i Arzantina, Peroa, Bolivia, Ekoatera ary Kolombia.
Asia: mandrakotra ny morontsiraka atsinanan'i Rosia ary mitohy amin'ny firenena Aziatika hafa toa an'i Japana, Filipina, Taiwan, Indonezia, Singapore ary Malezia.
Oseania: Ny Nosy Solomon, Tuvalu, Samoa ary Nouvelle Zélande dia firenena ao Oseania misy ny Ring of Fire.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny Pacific Ring of Fire ianao, ny asany ary ny toetrany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haibolantany » Vatosoa afo